सामयिक शृङ्खला: 52–0 Ma
चमेरो चमेरो एक स्तनधारी जीव हो। यो 'काइरोप्टेरस' समूहमा पर्दछ। कोइरोप्टेरस ग्रीस भाषाबाट व्युत्पत्ति भएर आएको शब्द हो। जसको अर्थ हुन्छ Hand Wings अर्थात् हातजस्तो पखेटा भन्ने हुन्छ । चमेरोको तीखो कोणाकारका पखेटाहरू हुन्छन्। यी पखेटाहरू झण्डै झण्डै मानिसको हात र पाखुरासँगै मिल्दाजुल्दा हुन्छन्। चमेरो एक यस्तो जीव हो, जो स्तनधारी भइकन आकाशमा उड्न सक्तछ। त्यसो त अन्य स्तनधारी जीवहरू जस्तै लोखर्के, बाँदर आदिजस्ता जीवहरू पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ उडेर पुगेको हामी देख्दछौँ तर तिनीहरूको उड्ने गति वा क्षमता सीमित क्षेत्रमा मात्र हुन्छ। जबकि चमेरो खुला आकाशमा स्वतन्त्र रूपमै विचरण गर्न सक्तछ। चमेरोको शारीरिक बनावटबारे भन्नुपर्दा यसको आकार चङ्गा जस्तै देखिन्छ। त्यसले गर्दा पनि यसलाई आकाशमा सजिलैसँग उड्न मद्दत पुग्दछ।
१ चमेरोका प्रजातिहरू
चमेरोका प्रजातिहरू[सम्पादन गर्ने]
विश्वमा झण्डै एघार सय प्रजातिका चमेराहरू पाइन्छन्। यिनलाई दुई प्रकारका चमेराहरूमा वर्गीकरण गरिएको छ। एउटा मांसाहारी चमेरो र अर्को फलाहारी चमेरो। मांसाहारी चमेरो कीरा, फट्याङ्ग्राहरू मात्र खाएर जीवन निर्वाह गर्दछ भने फलाहारी चमेरो चाहिँ फलफूल खाएर जीवन निर्वाह गर्दछ। आकारमा मांसाहारीको तुलनामा फलाहारी चमेरो अलिक ठूलो हुन्छन्। प्रतिशतको आधारमा भन्नुपर्दा मांसाहारी चमेरोको सङख्या ७० प्रतिशत रहेको छ भने बाँकी ३० प्रतिशत मात्र फलाहारी चमेरा हुन्छन्। चमेराहरू विभिन्न आकार र रङहरू पाइन्छन्। विशेषगरी यिनीहरू कालो र खैरो रङका हुन्छ तर केही चमेराहरू भने पहेंलो चम्किलो रङका, केही चाँदी रङका, केही सुन्तला रङका र केही सेतो अनि खैरो रङका पनि हुन्छन्। यसका साथै केही चमेराहरूको शरीर वा पखेटामा थोप्ला-थोप्ला बुट्टा र धर्साहरू पनि रहेको पाइन्छ। चमेराहरू विशेषगरी रूख र बाँसका झ्याङहरूमा टाउको तल गरी झुण्डिएर बस्ने गर्दछन्। चेप्टो परेको टाउको भएको यो जीव रातको समयमा बढी सक्रिय रहन्छ। चमेरा जातिमा Giant Golden-crowned Flying-fox नाम गरेको एउटा चमेरो हुन्छ जसको पखेटा नै झण्डै दुई मिटर लामो हुन्छ। यो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो चमेरो मानिन्छ। त्यसैगरी 'बम्ल्बेबी ब्याट' नाम गरेको चमेरो विश्वकै सबैभन्दा सानो चमेरो मानिन्छ। यस किसिमको सानो चमेरो दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियामा बढी मात्रामा पाइन्छन्। यो चमेरो यति सानो हुन्छ कि यसको पखेटालाई पट्याएर एउटा सानो सलाईको बट्टामा मजाले अटाउन सकिन्छ।
चमेराहरू पर्यावरण र जैविक विविधताको दृष्टिकोणले उपयोगी जीव मानिएका छन्। खासगरी फलाहारी चमेराहरूले वनजङ्गल जोगाउन र बिउविजन परागसेचन गरेर फूलहरूको फर्टिलाईज गर्न समेत मद्दत गर्दछ। त्यसैगरी मांसाहारी चमेराहरूले पनि मानिस र विभिन्न अन्नबालिका लागि हानिकारक मानिने कीराहरूलाई खाएर अथवा मारेर मद्दत पुर्‍याइरहेको हुन्छ।
↑ Eick et al.; Jacobs, DS; Matthee, CA (२००५), "A Nuclear DNA Phylogenetic Perspective on the Evolution of Echolocation and Historical Biogeography of Extant Bats (Chiroptera)", Molecular Biology and Evolution 22 (9): १८६९, डिओआई:10.1093/molbev/msi180, पिएमआइडी 15930153, "Several molecular studies have shown that Chiroptera belong to the Laurasiatheria (represented by carnivores, pangolins, cetartiodactyls, eulipotyphlans, and perissodactyls) and are only distantly related to dermopterans, scandentians, and primates (Nikaido et al. 2000; Lin and Penny 2001; Madsen et al. 2001; Murphy et al. 2001a, 2001b; Van Den Bussche and Hoofer 2004)."
↑ "संक्षिप्त परिचय", राजेशमान केसी, गोरखापत्र।
विकिमिडिया कमन्समा चमेरो सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू रहेका छन्।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=चमेरो&oldid=971863" बाट अनुप्रेषित